Proton Radiation Therapy Kanzera Kurapa Center - California Proton
ONA KUTI TIRI KUGADZIRA SEI KUCHENGETEKA MUMWE-PAMWE CHETE NOKUDZIDZISA TELEMEDICINE
Telemedicine Sarudzo Izvo Zvino Zvave Kuvapo
kutsvaka Patient Portal858.283.4771
Ubongo & Spine
Pancreatic & Bile Dhiragi
Musoro & Neck
Dzokororo & Sekondari
Mwoyo Murefu Rutsigiro
Mutengo & Kufukidza
Mangwana Ari nani
Kurwisa Kenza na
Kana iwe wakamboonekwa kekutanga, kana uri kutarisana nekenza inowanzoitika, kurapwa kweproton kunogona kuve kwako kwakanyanya sarudzo senge imwe yenyika dzese dzakachengeteka uye dzinoshanda kwazvo dzekenza kurapwa.
Proton kurapa inzira isinganyanye kuvhiringidza imwe nzira, yakakurudzirwa mhando dzakawanda dzemakomarara dzakamborapwa nenzira dzechinyakare dzakadai sekuvhiya, chemotherapy uye X-ray radiation. Inowanikwa muSan Diego, California Protons Cancer Therapy Center iri pamberi pekurapa kwekurapa, kutsvaga uye biotechnology. Nemakore anopfuura makumi mashanu ekubatanidzwa kweproteon, vanachiremba vedu vane mukurumbira pasi rose vanowedzera marapirwo ekurwisa cancer pamwe nemidziyo yekurapa vanhu vese vanowanzoita cancer.
Tumor Radiation Kurapa
Yakanyatsoburitswa mukati memamirimita maviri, tekinoroji yedu yekuongororesa penzura, inopihwa mumakamuri ese mashanu ekurapa, inoburitsa dhigirii rakawanda rekurapa cancer nekuuraya radiation inoenderana chaizvo neakasarudzika chimiro uye saizi yebundu. Iyi tekinoroji inotarisana zvakanyanya inorwisa bundu neaser chaiyo, asi ichisarudzira hutano nemitezo.
San Diego Cancer Kurapa Center
Kumba kune rimwe remasangano epasi rose ane ruzivo rwehutachiona muproton kurapwa kurapwa nzvimbo, vanachiremba vedu vanozivikanwa pasi rese uye vanotsvaga nevarwere vanobva pasirese. Muchokwadi, director wedu wezvekurapa akazvirapa pachezvake anopfuura zviuru gumi zvekenza yeprostate — kupfuura chero munhu upi zvake ari munyika.
Dzidza zvakawanda nezve yedu kenza yekurapa nzvimbo.
Cancer Kurapa Center
Kubva kuna vanachiremba vedu kuenda kune concierge masevhisi ekutsigira zvirongwa, isu tinopa iyo yepamusoro nhanho yemunhu kurapwa kwevarwere panzvimbo yedu yekurapa kenza. Vashandi vedu vese vakazvipira kurwisa kenza yemunhu wese uye mazuva ese isu tinoedza kuyedza kugadzira nharaunda umo varwere vedu, mhuri dzavo neshamwari vanonzwa kugamuchirwa nenharaunda izere nevanhu vane hushamwari, vanobatsira vanobata munhu wese sezvavangaite nhengo dzemhuri yavo.
Iyo Proton Therapy
Proton radiation radiation inogona kushandiswa chete, kana pamwe chete nekuvhiya uye chemotherapy, kurapa akawanda marudzi ekenza uye mamota, kusanganisira asi asingagumiri kune:
Musoro & Neck Cancers
Uropi & Spine Tumors
Standard X-Ray Kujeka
Standard X-ray radiation uye proton kurapa ese ari maviri marudzi e "kunze danda" radiotherapy. Nekudaro, zvigadzirwa zveumwe neumwe zvakatosiyana uye zvinoguma nekusiyana-siyana mazinga emagetsi ekuratidzira kune nzvimbo tumor uye nhengo dzakatenderedza uye nhengo.
Mibvunzo nezveinishuwarenzi uye kurapwa kurapwa?
Ini ndaida kurarama hupenyu hwakareba uye ndaisada kuzviisa panjodzi yekurohwa nemoyo kana kukuvara kwemoyo, saka ndakasarudza proton kurapwa. Mushure mekutaurirana kwangu naDkt Chang, ini ndakangoziva kuti California Protons ndiko kwandaida kuva. Akatora nguva yakawanda neni uye ini ndainzwa kuva nechivimbo kwazvo mukugona kwake.
Chifuva cheCancer Murwere
Proton kurapwa aive 'mutambo chinja.' Hapana zuva rinopfuura iro ini handifungi kuti takawana rombo rakanaka sei kugara makiromita matanhatu kubva kune imwe yenzvimbo dzakanaka dzepraton pasi. Vashandi vese vanoshamisa. Kunzwira tsitsi, kuziva uye kutevedzera zvaiitika zvaishamisa.
Baba vaKasey Harvey
Chiremba Rhabdomyosarcoma Murwere
Ini ndakasangana nezvakawanda zvisina kuringana kubva kurapwa dzangu. Ini ndakadzidzisa emapoka evarume nevarume vekadzi kuyambuka nyika nguva dzese dzandairapwa, ndisina kana kurasikirwa nezuva rimwe. Ini ndakachengeta hushamwari hwandinokoshesa zvakanyanya nemukadzi wangu, JoAnn, uye kuramba ndakabatikana sababa uye chipangamazano munharaunda.
Prostate Kenza Murwere
Isu takasarudza proton kurapwa nekuda kwekugona kwayo kupinda zvakachengeteka kupinda muuropi kuti isvike chikamu chebundu iro risingagoni kubatwa kare. Uye sezvo tekinoroji kuCalifornia Protons ndiyo nyowani uye yakanyanya kuwanda munyika, isu takafunga kuti 'sei kuenda kumwe kumwe?'
Baba vaNatalie Wright
Pediatric Brain Tumor Murwere
A blog nezve tariro, kurapa uye simba kukunda. Read More
Proton Therapy Kurapa FAQs
Ronga Kushanya kwako
9730 Zhizha Ridge Rd
M-F 8 am-5pm PT
Internet Video redhiyo chiitiko TV Social Media News Chinyorwa Waimbove murwere kana iyezvino Murwere Mhuri kana Shamwari Chiremba Referral Kuendeswa Kuchipatara Inishuwarenzi Referral mwe sei mukanzwa pamusoro pedu?*
Kana zvimwe, ndapota taura
Street Address Mutsara we2 manzwiro mamiriro AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IcelandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingHondo dzehondo AmericaHondo dzehondo EuropeMauto Akasungwa Pacific Zipi kodhi
HematologyOncology MedicalChiremba OncologyRadiation OncologyKuvhiya OncologyOncology NursingPhysicsDosimetrymwe
Wanzwa sei nezve chiitiko ichi?
Bhuroka / Chikwangwani muM mail
Tsamba Yega / Kukoka
Mutungamiriri / Supervisor